iphone enina batary fiasana amin'ny varotra China Manufacturer
Description:Vidiny tsara indrindra ho an'ny IPhone enina,IPhone Rafitra fiarovana an-trano,Aiza no hividianana batterie enina
Home > Products > Batterie IPhone > IPhone 6 Battery > iphone enina batary fiasana amin&#39;ny varotra
Ny iPhone 6s batterie dia mifanentana tanteraka amin'ny iPhone 6s, amin'ny fampiasana tsipika mahaleo TI IC, dia manolotra taham-pivoarana avo lenta sy fahaiza-manao tsara. Manome toky ny tsara indrindra ho an'ny modela batteries rehetra , ny zavatra voalohany noraisintsika dia ny fiarovana . Mifototra amin'io tanjona io, dia manangana tranokely ho an'ny solika isika. Farany dia namolavola ity fiakarana avo lenta ity sy ny fiarovana ny fiarovana amin'ny finday .
Suitable: apple iphone 6S
Kapila: 1715 mAh
Fitaovana ho an'ny andro lava iPhone 6S phone battery
Ny fahafaha-manaikitra tanteraka dia 1715 mAh, izay mitovy amin'ny original.100% mifanentana amin'ny findainao, hahazoana antoka fa mahomby izy io.
Vidiny tsara indrindra ho an'ny IPhone enina IPhone Rafitra fiarovana an-trano Aiza no hividianana batterie enina Fitaovana finday tsara indrindra ho an'ny iPhone Vidiny tsara indrindra ho an'ny raharaha Charger Apple Mividiana finday tsara indrindra ho an'i Huawei Vidiny Battery ho an'ny finday IPhone Fanodikodinam-barotra an-tariby ho an'ny IPhone 7